I-China High Sensitive Mine Detector yoMkhosi weZixhobo zoMkhosi kunye neFactory |Heweiyongtai
UMD-III detector mgodini isetyenziswa ngokubanzi ukubamba ngesandla (ijoni elinye elisebenzayo) detector mgodini.Yamkela itekhnoloji ye-high frequency pulse induction kwaye inovakalelo oluphezulu, ngakumbi ilungele ukufumanisa imigodi yentsimbi emincinci.Umsebenzi ulula, ngoko ke abaqhubi banokusebenzisa isixhobo kuphela emva koqeqesho olufutshane.
I-1.I-Waterproof, enokuthi ibonwe phantsi kwamanzi.
I-2.Ukulawulwa yi-microprocessor enexesha elichanekileyo, ukuguqulwa ngokukhawuleza kunye nokukwazi ukucwangcisa umqondiso onamandla.
3.Uvakalelo oluphezulu lokuchonga izinto ezincinci zetsimbi.
Ukubona ubude bepali
3LEE LR20 Manganese Iseli eyomileyo yealkaline
Kwi-sensitivity ephezulu - iiyure ze-12
Ngexesha eliphakathi kunye novakalelo oluphantsi - iiyure ze-18
I-voltage ephantsi eyothusayo ngesandi kunye nokukhanya
Ivalwe ngokupheleleyo kwaye ikwazi ukusebenza 2 m phantsi kwamanzi.
Eyona ipali inde yi-965mm, eyona imfutshane yi-695mm, kunye nobunzima be-1300g.Glass resin telescopic intonga, umphezulu coated ukukhusela okusingqongileyo.Ubungakanani bokubona ikhoyili yi-273mm * 200mm, izinto ezimnyama ze-ABS, umphezulu uphathwa nge-EMC, kunye ne-hybrid RX coil isetyenziselwa ukuphucula umlinganiselo wesignali / ingxolo.
Ngaphambili: Izixhobo zoMkhosi zokuFumana uMgodi ophathwa ngesandla
Okulandelayo: Ngaphantsi kweNkqubo yokuSkena kweMoto
I-Suit yokuLahla iBomb
Inkqubo yokuHlola yoKhuseleko lweX-Ray, I-X-Ray Baggage Scanner, Iskena esiphathwayo seX-Ray, Telescopic Manipulator Arm, Ukulandela umtshini oqhumayo, Ibhola lokugada,